ကိုယ်စောင့်နတ်အကြောင်းနှင့် လူကို စောင့်ရှောက်ပုံအကြောင်း"
ကိုယ်စောင့်နတ်အကြောင်းနှင့် လူကို စောင့်ရှောက်ပုံအကြောင်း" ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ မေး > ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာ တကယ်ရှိပါသလား၊ ဖြေ > ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်၊ မကောင်းမှုပြုသောသူသည် သူမကောင်းမှုပြုတဲ့အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင်ပတမဦးဆုံးသိ၏ ထိုနောက်သူ၏ကိုယ်စောင့်နတ်သိ၏ ထိုနောက်သူတပါး၏ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်းသိမြင်နိုင်သော် တန်ခိုးရှင်များသိ၏ လို့" ပါရာဇိကဏ်အဌထာ သုဒိန္ဒကဏ္ဍ "အဖွင့်မှာပါတဲ့စာရပ်ကိုထောက်ပြီး လူကိုနတ်စောင့်တယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ နောက်မေးခွန်းတခုက ... မေး > လူကို ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်သလည်းဆိုတာပါ၊ ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့ လူကို စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုရှိတဲ့ သူတော်ကောင်းနတ်များက စောင့်ရှောက်ကြပါတယ် ဘုန်းကံမွဲမွဲ လူများကိုတော့ တန်ခိုးသေးနုပ်ပြီး စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းမှု မရှိတဲ့ နတ်သေးနတ်မွှား လေးတွေက စောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။ တန်းခိုးအင်အားကြီးမားလေ လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပိုရှိလေမို့ သူလုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏ သူလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ အတိုင်းအတာထဲကနေ ကူညီစောင့်ရှောက် ပေးကြပါတယ်။ ရှေးက ဗရာဏသီမင်းဟာ ကောသလမင်းကို သတ်ပြီး တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းပိုက်၊ ကောသလမင်းရဲ့ မိဖုရားကိုလည်း သူမိဖုရားအဖြစ် သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမိဖုရားကြီးမှာ သွားလေသူ ကောသလမင်းကြီးနဲ့ ရထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကျန်ခဲ့ပါတယ်၊ အချိန်တန်တော့ သားယောကျာ်းလေး မွေးဖွားခဲ့တယ်၊ အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ အခြားမိဖုရားနဲ့ ရထားတဲ့ ကုဂုင်္ဂဒေဝီဆိုတဲ့ မင်းသမီးလေးနဲ့ ချစ်ကြိုက်သွားကြတယ်။ ဒါကို ဗရာဏသီမင်းကြီးကသိလို့ မင်းသားကိုသတ်ဘို့ လုပ်တယ်၊ အဲဒါကို မင်းသားလေးကို သေဘေးကလွတ်အောင် ကယ်တင်ပေးခဲ့တယ်၊ ကယ်တင်ပေးသူက မင်းသားလေးရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ နတ်က သူလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ပမာဏ အားလျှော်စွာ လုပ်ကိုင်စောင့်ရှောက် ပေးတယ်လို့ မှတ်သားစေခြင်ပါတယ်။ နောက်မေးခွန်းတခုက ...... နတ်က လူ့ကိုယ့်ထဲမှာ နေသလား အပြင်မှာ နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ လူကိုယ်ထဲမှာ မနေပါဘူး အပြင်ဘက်မှာနေပါတယ်၊ ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘုမ္မစိုး၊ ရုက္ခစိုး အစရှိတဲ့ နတ်တွေပါ။ လူ့ ကိုယ်ထဲမှာ နတ်ရှိရင် အဲဒီလူမျိုးကို တချို့က စုန်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ နောက်မေးခွန်းတခု .... လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စောင့်နတ်ရှိပါသလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ လူတိုင်းမှာ သဘာဝအားဖြင့် ကိုယ်စောင့်နတ်ရှိပါတယ်။ အထက်မှာဆိုထားသလို ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့လူကို စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာ တောင့်တင်းတဲ့ သူတော်ကောင်းနတ်များက စောက်ရှောက်ပြီး ဘုန်းကံမွဲမွဲ လူများကိုတော့ တန်ခိုးသေးနုပ် စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းမှု မရှိတဲ့ နတ်သေးနတ်မွှားလေးတွေက စောင့်ရှောက်ပါတယ်။ ကိုယ်စောင့်နတ်တွေဆိုတာ လူစောင့်ရှောက်တဲ့ လူရဲ့အလိုကို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲတတ်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် တန်ခို့သေးနုပ်ပြီး စိတ်ဓါတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုမရှိတဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်တွေပေါ့၊ ဒီလိုနတ်တွေက သူစောင့်ရှောက်တဲ့ လူကကောင်းရင် သူလည်း လိုက်ကောင်းပြီး သူစောင့်ရှောက်တဲ့သူက ဆိုးရင် သူလည်း လိုက်ပြီးဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။ တန်ခိုးကြီးမားပြီး စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ နတ်များကတော့ သူတို့မကြိုက်တာလုပ်ရင် အဲဒီလူကို စွန့်ပယ်ပြီး ထွက်သွားတတ်ကြပါတယ်၊ လူပြောင်းတိုင်းလည်း သူကလိုက်ပြီး မပြောင်းလွဲတတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်...စေတိယမင်းကို တန်ခိုးကြီးတဲ့ နတ်သားလေးပါး စောင့်ရှောက်ပါတယ်၊ စေတိယမင်း မုသားပြောတော့ နတ်သားလေးပါးက စေတိယမင်းကို တခါထဲ စွန့်ပြစ်ထွက်သွားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းမှာ သဘာဝအားဖြင့်ကိုယ်စောင့်နတ် ရှိကြသော်လည်း ကိုယ်စောင့်နတ်မကြိုက်တာလုပ်လို့ ကိုယ်စောင့်နတ်ရဲ့ စွန့်ပြစ်ခြင်း ခံကြရလို့ ကိုယ်စောင့်နတ် မရှိတဲ့ လူမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်စောင့်နတ် မြဲခြင်ရင် သီလမြဲကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ.....၊ ရေးသူ > အရှင်ခေမာနန္ဒ ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾ အောင်ဝိုင်းဖြိုးရဲ့ အမေးမှာ - "အရှင်ဘုရား တပည့်တော် အား ကိုယ်စောင့်နတ် နှင့် ပတ်သတ်သော အကြောင်းအရာများကို ဖြေကြားပေးပါဘုရား. ကိုယ်စောင့်နတ်သည် မည်သည့် နတ်အနွယ်ဝင် ဖြစ်ပါသလဲ ဘုရား. ကိုယ်စောင့်နတ်သည် အစဉ်အမြဲ စောင့်ရှောက်ခြင်း ရှိပါသလား ဘုရား. ကိုယ်စောင့်နတ် အဖြစ်ကို မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ရောက်ရှိနိုင်ပါသလဲ ဘုရား. အရှင်ဘုရားကို ရှိခိုးဦးချပါတယ် ဘုရား" နိုင်ငံခြားသား ရဟန်း ချက်ဇ် ဦးသရဏရဲ့ အဖြေ - ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကိုယ်စောင့်နတ်ရှိလိုတယ်ဆိုရင် ခြောက်နည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် - ၁။ ကံကောင်းလို့ အရင်ဘဝမှ ဆွေမျိုးတစ်ယောက်က အခု နတ်ဖြစ်ရင် ဒကာ ဒကာမတို့ရဲ့ ကိုယ့်စောင့်နတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုပါတော့ ရန်ကုန်မှ ဆရာကြီး ဦးရှိန်ဟာ လူတွေရဲ့ အပမှီတဲ့ရောဂါ ( သရဲစီးတဲ့ရောဂါ) တွေကို (အရင်ဘဝက သူ့အမေ) အခု ဒီဘဝမှာ သူ့ကိုယ်စောင့်နတ်ဖြစ်သူရဲ့ စွမ်းအားနဲ့ ကုသပေးပါတယ်။ (ကုသမှု မှန်ကန်လို့ PhDဆုလည်း ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က ဆုံးသွားပါပြီ။) ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်မှပြောမယ်ဆိုရင် ဥဒါန ဗာဟိယသုတ်မှာဆိုတော့ ဗာဟိယ ဒါရုစီရိယ အရင်ဘဝမှ ဆွေမျိုး ဒီဘဝမှာ နတ်ဖြစ်တဲ့ နတ်တစ်ပါးဟာ ဗာဟိယဆီလာပြီး ဓမ္မမဟုတ်တဲ့အကျင့်ကို ပြောပြပြီး၊ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ တွေဖို့ နှိုးဆော်ပေးပါတယ်။ ဒါဆို ဒီလို ကံကောင်းလို့ ကိုယ့်စောင့်နတ်တစ်ဦး ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ ပထမနည်း။ ၂။ ပရိတ် ရွတ်တဲ့အခါ နတ်တွေက လာစောင့်ရှောက်တတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် (သက်သတ်လွတ်စားပြီး) မဟာသမယသုတ်ကို နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း မနက် ၁ နာရီ တစ်ခါ မနက် ၃ နာရီတစ်ခါ ရွတ်လိုက်ရင် ၃ လလောက်ကြာပြီး နတ်တွေက လာစောင့်ရှောက်မယ် ကိုယ့်ကြိုက်တာတွေ လုပ်ပေးမယ် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။ (သက်သတ်လွတ်စားရတာ နတ်တွေက အသားအနံ့ မကြိုက်လို့ သူတို့ကို ကိုယ့်အနီးလာစေချင်တယ်ဆိုရင် သက်သတ်လွတ်စားရပါတယ်။) ၃။ သီလကို ဆောက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် နတ်တွေက စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် သကြားမင်းက စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ် - ရှိခိုးတောင် ရှိခိုးပါတယ်။ သံယုတ်နိကာယ် ဂဟဋ္ဌဝန္ဒနာသုတ်မှာ သိကြားမင်းက မိန့်တယ် - ဗြာဟ္မဏပုဏ္ဏား၊ ခတ္တိယာ၊ မဟာရဇ်၊ နတ်ကြီး ၃၀ကလည်း သိကြားမင်းကို ရှိခိုးကြပါတယ်။ သို့သော် သိကြားမင်းက သီလပြည့်စုံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ကို ရှိခိုးတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ၄။ လှူဒါန်းပြီး နတ်တွေကို အနုမောဒနာ (ဝမ်းသာဖို့) သာဓုခေါ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုရင်လည်း နတ်တွေက ကာကွယ်ကြမယ်။ သီရိလင်္ကာမှာ အိမ်က ဆွမ်းကပ်ပြီး ဆွေမျိုးညာတိတွေကို အမျှဝေလိုက်ရင်တော့ "ကိုယ့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကုသိုလ်မှ ဝမ်းသာပြီး ကာကွယ်ပါစေ"လို့ ဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းကြပါတယ် - အာကာသဋ္ဌာ စ ဘုမ္မဋ္ဌာ၊ ဒေဝါ နာဂါ မဟိဒ္ဓိကာ၊ ပုညံ တံ အနုမောဒိတွာ စိရံ ရက္ခန္တု မံ ပရန္တိ။" ၅။ မေတ္တာဘာဝနာ ပွားရင်လည်း ကိုယ်စောင့်နတ်တွေက လာပြီး ကာကွယ်မယ်လို့ အင်္ဂုတ္တိုရ်နိကာယ် ၁၁ မေတ္တာနိသံသသုတ် မှာ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူပါတယ်။ မေတ္တာဘာဝနာ အားထုတ်ရင် ကောင်းကျိုး ၁၁ မျိုးရပါတယ်။ အဲဒီ ကောင်းကျိုး ၁၁ မျိုးမှာ တစ်မျိုးက "ဒေဝတာ ရက္ခန္တိ" (နတ်များ ကာကွယ်ကြမည်) လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိလိန္ဒဝစ္ဆမထေရ်ကြီးရဲ့ မေတ္တာစွမ်းအားက အင်မတန်မှ ကြီးမားပါတယ်။ အင်္ဂုတ္တိုရ်နိကာယ် ၁ ဧတဒဂ္ဂဝဂ္ဂမှာ မြတ်စွာဘုရား ပိလိန္ဒဝစ္ဆမထေရ်ကြီးကို ဒီလို ချီးမွှမ်းတော်မူပါတယ် "ဧတဒဂ္ဂံ ဘိက္ခဝေ မမ သာဝကာနံ ဘိက္ခူနံ ဒေဝတာနံ ပိယမနာပါနံ ယဒိဒံ ပိလိန္ဒဝစ္ဆော။" "ရဟန်းတို့ ငါဘုရား တပည့်သာဝကာတို့တွင် နတ်တို့၏ချစ်ခြင်းမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးရဟန်းသည် ပိလိန္ဒဝစ္ဆမထေရ် ဖြစ်ပါတယ်။" ၆။ မဂ် ဖိုလ် ရမယ်ဆိုလိုရှိရင်လည်း နတ်တွေက ကာကွယ်လိမ့်မယ်။ ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာရဲ့ ပထမဆုံး ပုံဝတ္ထုဟာ စက္ခုပါလမထေရ်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီမှာ စက္ခုပါလမထေရ်ကြီးက ရဟန္တာဖြစ်ပြီး သူ့မျက်စိတွေက ပျက်သွားပါတယ်။ မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။ ခရီးထွက်တဲ့အခါ လမ်းပြတဲ့ ရဟန်းတော်ဟာ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ပါရာဇိကကျတော့ စက္ခုပါလမထေရ်ကြီးက သူ့ကို နှင်ထုတ်တော်မူပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်ပါးတည်းပဲ လမ်းပေါ်မှာ ကျန်တော်မူတယ်။ဒါကို သိကြားမင်းက သိသွားပြီး စက္ခုပါလမထေရ်ကြီးကို ကိုယ့်တိုင်လာပြီး လမ်းပြပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စောင့်နတ်ရဖို့ - (၁) အရင်ဘဝမှ ဆွေမျိုးရှိရမယ်၊ (၂) ပရိတ်ရွတ်ရမယ် (၃) သီလပြည့်စုံရမယ် (၄) လှူဒါန်းပြီး အနုမောဒနာပြုရမယ် (၅) မေတ္တာဘာဝနာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ် (၆) မဂ်ဖိုလ်အောင်မြင်ရမယ်။ ကိုယ့်စောင့်နတ်တွေ ဘယ်နှစ်ပါး ဖြစ်ပါသလဲလို့ သိဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ သူတို့ကလည်း ကူညီပေးချင်စိတ်ရှိမှပဲ ကူညီပေးကြပါတယ်။ အဲ့လို သူတို့ကို တာဝန် ပေးမထားပဲနဲ့ လွတ်လပ်စွာ စောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။ ကုသိုလ်မလုပ်ဘဲ အကုသိုလ်များရင်တော့ ပြေးကြမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒကာ ဒကာမတွေက ကုသိုလ်တွေ အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပြီး နတ်တို့ရဲ့ အချစ်ကို မပျောက်စေတဲ့ ရဟန္တာဆုကို အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ သတ္တဝါ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ နိုင်ငံခြားသား ရဟန်း ချက်ဇ် ဦးသရဏပါ။ ဦးဇင်းရေးထားတဲ့ မြန်မာစာကို Cathy Hlaing ပြင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ အမြဲကျန်းမာချမ်းသာပါစေ ။ Credit. To. Original Upload #အရှင်ဓမ္မရက္ခိတမှကူးယူဖော်ပြသည် ================ ကိုယျစောငျ့နတျအကွောငျးနှငျ့ လူကို စောငျ့ရှောကျပုံအကွောငျး" ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ မေး > ကိုယျစောငျ့နတျဆိုတာ တကယျရှိပါသလား၊ ဖွေ > ကိုယျစောငျ့နတျဆိုတာတကယျရှိပါတယျ၊ မကောငျးမှုပွုသောသူသညျ သူမကောငျးမှုပွုတဲ့အကွောငျးကို သူကိုယျတိုငျပတမဦးဆုံးသိ၏ ထိုနောကျသူ၏ကိုယျစောငျ့နတျသိ၏ ထိုနောကျသူတပါး၏ စိတျကို ဖောကျထှငျးသိမွငျနိုငျသျော တနျခိုးရှငျမြားသိ၏ လို့" ပါရာဇိကဏျအဌထာ သုဒိန်ဒကဏ်ဍ "အဖှငျ့မှာပါတဲ့စာရပျကိုထောကျပွီး လူကိုနတျစောငျ့တယျဆိုတာ သိရပါတယျ။ နောကျမေးခှနျးတခုက ... မေး > လူကို ဘယျလိုစောငျ့ရှောကျသလညျးဆိုတာပါ၊ ဘုနျးကံကွီးမားတဲ့ လူကို စိတျဓာတျအငျအား ခိုငျမာတောငျ့တငျးမှုရှိတဲ့ သူတျောကောငျးနတျမြားက စောငျ့ရှောကျကွပါတယျ ဘုနျးကံမှဲမှဲ လူမြားကိုတော့ တနျခိုးသေးနုပျပွီး စိတျဓာတျအငျအား ခိုငျမာတောငျ့တငျးမှု မရှိတဲ့ နတျသေးနတျမှား လေးတှကေ စောငျ့ရှောကျကွပါတယျ။ တနျးခိုးအငျအားကွီးမားလေ လုပျနိုငျတဲ့အရာတှေ၊ လုပျပိုငျခှငျ့တှေ ပိုရှိလမေို့ သူလုပျနိုငျတဲ့ပမာဏ သူလုပျခှငျ့ရှိတဲ့ အတိုငျးအတာထဲကနေ ကူညီစောငျ့ရှောကျ ပေးကွပါတယျ။ ရှေးက ဗရာဏသီမငျးဟာ ကောသလမငျးကို သတျပွီး တိုငျးပွညျကိုသိမျးပိုကျ၊ ကောသလမငျးရဲ့ မိဖုရားကိုလညျး သူမိဖုရားအဖွဈ သိမျးပိုကျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီမိဖုရားကွီးမှာ သှားလသေူ ကောသလမငျးကွီးနဲ့ ရထားတဲ့ ကိုယျဝနျကနျြခဲ့ပါတယျ၊ အခြိနျတနျတော့ သားယောကျြားလေး မှေးဖှားခဲ့တယျ၊ အရှယျရောကျလာခြိနျမှာ အခွားမိဖုရားနဲ့ ရထားတဲ့ ကုဂုင်ျဂဒဝေီဆိုတဲ့ မငျးသမီးလေးနဲ့ ခဈြကွိုကျသှားကွတယျ။ ဒါကို ဗရာဏသီမငျးကွီးကသိလို့ မငျးသားကိုသတျဘို့ လုပျတယျ၊ အဲဒါကို မငျးသားလေးကို သဘေေးကလှတျအောငျ ကယျတငျပေးခဲ့တယျ၊ ကယျတငျပေးသူက မငျးသားလေးရဲ့ ကိုယျစောငျ့နတျပဲ ဖွဈပါတယျ၊ နတျက သူလုပျပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ ပမာဏ အားလြှျောစှာ လုပျကိုငျစောငျ့ရှောကျ ပေးတယျလို့ မှတျသားစခွေငျပါတယျ။ နောကျမေးခှနျးတခုက ...... နတျက လူ့ကိုယျ့ထဲမှာ နသေလား အပွငျမှာ နသေလားဆိုတဲ့မေးခှနျးပါ။ လူကိုယျထဲမှာ မနပေါဘူး အပွငျဘကျမှာနပေါတယျ၊ ကိုယျစောငျ့နတျဆိုတာ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ရှိနတေဲ့ ဘုမ်မစိုး၊ ရုက်ခစိုး အစရှိတဲ့ နတျတှပေါ။ လူ့ ကိုယျထဲမှာ နတျရှိရငျ အဲဒီလူမြိုးကို တခြို့က စုနျးလို့သတျမှတျကွပါတယျ။ နောကျမေးခှနျးတခု .... လူတိုငျးမှာ ကိုယျစောငျ့နတျရှိပါသလား ဆိုတဲ့မေးခှနျးပါ။ လူတိုငျးမှာ သဘာဝအားဖွငျ့ ကိုယျစောငျ့နတျရှိပါတယျ။ အထကျမှာဆိုထားသလို ဘုနျးကံကွီးမားတဲ့လူကို စိတျဓာတျအငျအား ခိုငျမာ တောငျ့တငျးတဲ့ သူတျောကောငျးနတျမြားက စောကျရှောကျပွီး ဘုနျးကံမှဲမှဲ လူမြားကိုတော့ တနျခိုးသေးနုပျ စိတျဓာတျအငျအား ခိုငျမာတောငျ့တငျးမှု မရှိတဲ့ နတျသေးနတျမှားလေးတှကေ စောငျ့ရှောကျပါတယျ။ ကိုယျစောငျ့နတျတှဆေိုတာ လူစောငျ့ရှောကျတဲ့ လူရဲ့အလိုကို လိုကျပွီး ပွောငျးလဲတတျကွပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ တနျခို့သေးနုပျပွီး စိတျဓါတျအငျအား ခိုငျမာတောငျ့တငျးမှုမရှိတဲ့ ကိုယျစောငျ့နတျတှပေေါ့၊ ဒီလိုနတျတှကေ သူစောငျ့ရှောကျတဲ့ လူကကောငျးရငျ သူလညျး လိုကျကောငျးပွီး သူစောငျ့ရှောကျတဲ့သူက ဆိုးရငျ သူလညျး လိုကျပွီးဆိုးသှားတတျပါတယျ။ တနျခိုးကွီးမားပွီး စိတျဓာတျအငျအား ခိုငျမာတောငျ့တငျးတဲ့ နတျမြားကတော့ သူတို့မကွိုကျတာလုပျရငျ အဲဒီလူကို စှနျ့ပယျပွီး ထှကျသှားတတျကွပါတယျ၊ လူပွောငျးတိုငျးလညျး သူကလိုကျပွီး မပွောငျးလှဲတတျပါဘူး။ ဥပမာအားဖွငျ့...စတေိယမငျးကို တနျခိုးကွီးတဲ့ နတျသားလေးပါး စောငျ့ရှောကျပါတယျ၊ စတေိယမငျး မုသားပွောတော့ နတျသားလေးပါးက စတေိယမငျးကို တခါထဲ စှနျ့ပွဈထှကျသှားကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လူတိုငျးမှာ သဘာဝအားဖွငျ့ကိုယျစောငျ့နတျ ရှိကွသျောလညျး ကိုယျစောငျ့နတျမကွိုကျတာလုပျလို့ ကိုယျစောငျ့နတျရဲ့ စှနျ့ပွဈခွငျး ခံကွရလို့ ကိုယျစောငျ့နတျ မရှိတဲ့ လူမြိုးတှလေညျးရှိကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ကိုယျစောငျ့နတျ မွဲခွငျရငျ သီလမွဲကွပါလို့ တိုကျတှနျးပါရစေ.....၊ ရေးသူ > အရှငျခမောနန်ဒ ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾ အောငျဝိုငျးဖွိုးရဲ့ အမေးမှာ - "အရှငျဘုရား တပညျ့တျော အား ကိုယျစောငျ့နတျ နှငျ့ ပတျသတျသော အကွောငျးအရာမြားကို ဖွကွေားပေးပါဘုရား. ကိုယျစောငျ့နတျသညျ မညျသညျ့ နတျအနှယျဝငျ ဖွဈပါသလဲ ဘုရား. ကိုယျစောငျ့နတျသညျ အစဉျအမွဲ စောငျ့ရှောကျခွငျး ရှိပါသလား ဘုရား. ကိုယျစောငျ့နတျ အဖွဈကို မညျသညျ့ ပုဂ်ဂိုလျမြား ရောကျရှိနိုငျပါသလဲ ဘုရား. အရှငျဘုရားကို ရှိခိုးဦးခပြါတယျ ဘုရား" နိုငျငံခွားသား ရဟနျး ခကျြဇျ ဦးသရဏရဲ့ အဖွေ - ဗုဒ်ဓဘာသာမှာ ကိုယျစောငျ့နတျရှိလိုတယျဆိုရငျ ခွောကျနညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ - ၁။ ကံကောငျးလို့ အရငျဘဝမှ ဆှမြေိုးတဈယောကျက အခု နတျဖွဈရငျ ဒကာ ဒကာမတို့ရဲ့ ကိုယျ့စောငျ့နတျဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဥပမာဆိုပါတော့ ရနျကုနျမှ ဆရာကွီး ဦးရှိနျဟာ လူတှရေဲ့ အပမှီတဲ့ရောဂါ ( သရဲစီးတဲ့ရောဂါ) တှကေို (အရငျဘဝက သူ့အမေ) အခု ဒီဘဝမှာ သူ့ကိုယျစောငျ့နတျဖွဈသူရဲ့ စှမျးအားနဲ့ ကုသပေးပါတယျ။ (ကုသမှု မှနျကနျလို့ PhDဆုလညျး ရပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ သုံးနှဈလောကျက ဆုံးသှားပါပွီ။) ဗုဒ်ဓဘာသာကမျြးဂနျမှပွောမယျဆိုရငျ ဥဒါန ဗာဟိယသုတျမှာဆိုတော့ ဗာဟိယ ဒါရုစီရိယ အရငျဘဝမှ ဆှမြေိုး ဒီဘဝမှာ နတျဖွဈတဲ့ နတျတဈပါးဟာ ဗာဟိယဆီလာပွီး ဓမ်မမဟုတျတဲ့အကငျြ့ကို ပွောပွပွီး၊ မွတျစှာဘုရားနဲ့ တှဖေို့ နှိုးဆျောပေးပါတယျ။ ဒါဆို ဒီလို ကံကောငျးလို့ ကိုယျ့စောငျ့နတျတဈဦး ရနိုငျပါတယျ။ ဒါ ပထမနညျး။ ၂။ ပရိတျ ရှတျတဲ့အခါ နတျတှကေ လာစောငျ့ရှောကျတတျကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ (သကျသတျလှတျစားပွီး) မဟာသမယသုတျကို နတေို့ငျး နတေို့ငျး မနကျ ၁ နာရီ တဈခါ မနကျ ၃ နာရီတဈခါ ရှတျလိုကျရငျ ၃ လလောကျကွာပွီး နတျတှကေ လာစောငျ့ရှောကျမယျ ကိုယျ့ကွိုကျတာတှေ လုပျပေးမယျ ဆောငျရှကျပေးမယျ။ (သကျသတျလှတျစားရတာ နတျတှကေ အသားအနံ့ မကွိုကျလို့ သူတို့ကို ကိုယျ့အနီးလာစခေငျြတယျဆိုရငျ သကျသတျလှတျစားရပါတယျ။) ၃။ သီလကို ဆောကျတညျတယျဆိုလို့ရှိရငျ နတျတှကေ စောငျ့ရှောကျလိမျ့မယျ။ အထူးသဖွငျ့ သကွားမငျးက စောငျ့ရှောကျပေးပါတယျ - ရှိခိုးတောငျ ရှိခိုးပါတယျ။ သံယုတျနိကာယျ ဂဟဋ်ဌဝန်ဒနာသုတျမှာ သိကွားမငျးက မိနျ့တယျ - ဗွာဟ်မဏပုဏ်ဏား၊ ခတ်တိယာ၊ မဟာရဇျ၊ နတျကွီး ၃ဝကလညျး သိကွားမငျးကို ရှိခိုးကွပါတယျ။ သို့သျော သိကွားမငျးက သီလပွညျ့စုံတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျမြားတို့ကို ရှိခိုးတယျလို့ ပွောထားပါတယျ။ ၄။ လှူဒါနျးပွီး နတျတှကေို အနုမောဒနာ (ဝမျးသာဖို့) သာဓုချေါဖို့ ဖိတျချေါတယျဆိုရငျလညျး နတျတှကေ ကာကှယျကွမယျ။ သီရိလင်ျကာမှာ အိမျက ဆှမျးကပျပွီး ဆှမြေိုးညာတိတှကေို အမြှဝလေိုကျရငျတော့ "ကိုယျ့ပွုလုပျထားတဲ့ ကုသိုလျမှ ဝမျးသာပွီး ကာကှယျပါစေ"လို့ ဖိတျချေါဆုတောငျးကွပါတယျ - အာကာသဋ်ဌာ စ ဘုမ်မဋ်ဌာ၊ ဒဝေါ နာဂါ မဟိဒ်ဓိကာ၊ ပုညံ တံ အနုမောဒိတှာ စိရံ ရက်ခန်တု မံ ပရန်တိ။" ၅။ မတ်ေတာဘာဝနာ ပှားရငျလညျး ကိုယျစောငျ့နတျတှကေ လာပွီး ကာကှယျမယျလို့ အင်ျဂုတ်တိုရျနိကာယျ ၁၁ မတ်ေတာနိသံသသုတျ မှာ မွတျစှာဘုရား ဟောကွားတျောမူပါတယျ။ မတ်ေတာဘာဝနာ အားထုတျရငျ ကောငျးကြိုး ၁၁ မြိုးရပါတယျ။ အဲဒီ ကောငျးကြိုး ၁၁ မြိုးမှာ တဈမြိုးက "ဒဝေတာ ရက်ခန်တိ" (နတျမြား ကာကှယျကွမညျ) လို့ ဖွဈပါတယျ။ ပိလိန်ဒဝစ်ဆမထရျေကွီးရဲ့ မတ်ေတာစှမျးအားက အငျမတနျမှ ကွီးမားပါတယျ။ အင်ျဂုတ်တိုရျနိကာယျ ၁ ဧတဒဂ်ဂဝဂ်ဂမှာ မွတျစှာဘုရား ပိလိန်ဒဝစ်ဆမထရျေကွီးကို ဒီလို ခြီးမှမျးတျောမူပါတယျ "ဧတဒဂ်ဂံ ဘိက်ခဝေ မမ သာဝကာနံ ဘိက်ခူနံ ဒဝေတာနံ ပိယမနာပါနံ ယဒိဒံ ပိလိန်ဒဝစ်ဆော။" "ရဟနျးတို့ ငါဘုရား တပညျ့သာဝကာတို့တှငျ နတျတို့၏ခဈြခွငျးမှာ အမွငျ့မွတျဆုံးရဟနျးသညျ ပိလိန်ဒဝစ်ဆမထရျေ ဖွဈပါတယျ။" ၆။ မဂျ ဖိုလျ ရမယျဆိုလိုရှိရငျလညျး နတျတှကေ ကာကှယျလိမျ့မယျ။ ဓမ်မပဒ အဋ်ဌကထာရဲ့ ပထမဆုံး ပုံဝတ်ထုဟာ စက်ခုပါလမထရျေရဲ့ အတ်ထုပ်ပတ်တိကို ပွောပွပါတယျ။ အဲဒီမှာ စက်ခုပါလမထရျေကွီးက ရဟန်တာဖွဈပွီး သူ့မကျြစိတှကေ ပကျြသှားပါတယျ။ မမွငျနိုငျတော့ပါဘူး။ ခရီးထှကျတဲ့အခါ လမျးပွတဲ့ ရဟနျးတျောဟာ မိနျးမတဈယောကျနဲ့ ပါရာဇိကကတြော့ စက်ခုပါလမထရျေကွီးက သူ့ကို နှငျထုတျတျောမူပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး တဈပါးတညျးပဲ လမျးပျေါမှာ ကနျြတျောမူတယျ။ဒါကို သိကွားမငျးက သိသှားပွီး စက်ခုပါလမထရျေကွီးကို ကိုယျ့တိုငျလာပွီး လမျးပွပါတယျ။ အတိုခြုပျပွောမယျဆိုရငျ ကိုယျ့စောငျ့နတျရဖို့ - (၁) အရငျဘဝမှ ဆှမြေိုးရှိရမယျ၊ (၂) ပရိတျရှတျရမယျ (၃) သီလပွညျ့စုံရမယျ (၄) လှူဒါနျးပွီး အနုမောဒနာပွုရမယျ (၅) မတ်ေတာဘာဝနာ ကငျြ့ကွံအားထုတျရမယျ (၆) မဂျဖိုလျအောငျမွငျရမယျ။ ကိုယျ့စောငျ့နတျတှေ ဘယျနှဈပါး ဖွဈပါသလဲလို့ သိဖို့ မလှယျပါဘူး။ သူတို့ကလညျး ကူညီပေးခငျြစိတျရှိမှပဲ ကူညီပေးကွပါတယျ။ အဲ့လို သူတို့ကို တာဝနျ ပေးမထားပဲနဲ့ လှတျလပျစှာ စောငျ့ရှောကျကွပါတယျ။ ကုသိုလျမလုပျဘဲ အကုသိုလျမြားရငျတော့ ပွေးကွမှာပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ဒကာ ဒကာမတှကေ ကုသိုလျတှေ အတတျနိုငျဆုံး လုပျပွီး နတျတို့ရဲ့ အခဈြကို မပြောကျစတေဲ့ ရဟန်တာဆုကို အောငျမွငျနိုငျကွပါစကေုနျသတညျး။ သတ်တဝါ အားလုံး ကနျြးမာခမျြးသာကွပါစေ။ နိုငျငံခွားသား ရဟနျး ခကျြဇျ ဦးသရဏပါ။ ဦးဇငျးရေးထားတဲ့ မွနျမာစာကို Cathy Hlaing ပွငျပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးအမြားကွီး တငျပါတယျ။ အမွဲကနျြးမာခမျြးသာပါစေ ။ Credit. To. Original Upload #အရှငျဓမ်မရက်ခိတမှကူးယူဖျောပွသညျ